Barcelona iyo Juventus ayaa u soo baxay wareega kale ee UEFA Champions League kadib guulo… – Hagaag.com
Posted on 25 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Barcelona iyo Juventus ayaa u soo baxay wareega kale ee European Champions League, Xiddiga reer Brazil Neymar ayaa ka badbaadiyay kooxdiisa Paris Saint-Germain inay ka baxdo tartanka wuxuuna u horseeday inay 1-0 ku garaacaan Leipzig.
Kulamadii wareega afaraad ee Group-ka 7-aad, Barcelona ayaa guul weyn kala soo laabatay Dynamo Kiev, Ukraine, 4-0.
Kooxda reer Catalan ayaa ciyaarta la soo gashay koox ciyaartoy ay ka maqan yihiin ciyaartoy muhim ah sababo la xiriira dhaawac ama ka reebis go’aano farsamo awgood, waxaana iska hor imaadkii lagu dhameeyay goolal ay dhaliyeen qeybtii labaad Sergio Dest daqiiqadii 52aad, Martin Braithwaite daqiiqadihii 57aad iyo 70aad ee rigoore, iyo Antoine Griezmann daqiiqadii labaad ee waqtiga dhimashada ee ciyaarta.
Ciyaar kale oo isla guruubka ah, Juventus ayaa 2-1 uga badisay kooxda Ferencvaros ee Hungary. Mirto Ozoni ayaa daah furay goolasha Ferencvaros daqiiqadii 18-aad, ka dib xiddigga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa u barbareeyay Juventus daqiiqadii 35-aad, Alvaro Morata oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa xaqiijiyey guusha ay Juventus ugu soo baxday wareega ugu dambeeya iyadoo 2-1 ku badisay.
Barcelona ayaa leh 12 dhibcood oo ku hogaamineysa group-ka, halka Juventus ay leedahay 9 dhibcood, halka kooxaha kale Ferencvaros iyo Dynamo Kiev oo leh min hal dhibic.
Guruubka H, ​​Manchester United ayaa ku dhawaatay inay u soo baxdo wareega kale kadib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Basaksehir ee Turkey, Neymar ayaa Paris Saint-Germain ku hogaamiyay guul ay ka gaareen Leipzig ee Jarmalka, isagoo dhaliyay hal gool oo rigoore ah daqiiqadii 11aad, taasoo fursad u siisay kooxda Faransiiska inay u tartamaan weli kaarka isreebreebka ka dib markii laga badiyay Labadii kulan ee ka tirsanaa 3-dii kulan ee ugu horreeya tartanka.
Manchester United ayaa ku hogaamineysa kala sareynta Group H 9 dhibcood, Paris St. Germain iyo Leipzig ayaa isla leh min 6 dhibcood, farqiga dhibcaha ayey ku kala horeeyaan, halka Basaksehir ay ugu hooseyso guruubkan oo leh 3 dhibcood.
Dhinaca kale, kooxda Jarmalka ah ee Borussia Dortmund ayaa ku soo dhawaatay inay u soo baxdo wareega kale ka dib markii ay 3-0 ku garaaceen kooxda Club Brugge ee Belgium kulankii Group F, halka kooxda Lazio ee Talyaaniga ay ka badisay kooxda Zenit Saint Petersburg Russia, 3-1.
Dortmund ayaa kaalinta 1-aad kaga jirta Group F iyaga oo leh 9 dhibcood 4 kulan oo ay ciyaareen, Lazio ayaa ku lamaanan oo leh 8 dhibcood, halka Club Brugge ay ku jirto kaalinta 3aad oo leh 4 dhibcood, halka kooxda Zenit ay ugu hooseyso oo leh hal dhibic.